Kamerona: Ahiahy Amin’ny Fahalalahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2018 3:43 GMT
Ao amin'ny bilaoginy [fr], Édouard Tamba manahy momba ny fahalalahana ao amin'ny fireneny:
Ny 8 novambra , tonga tao amin'ny foiben'ny fivoriambe ny filohan'ny sous-prefet an'i Yaoundé II ary nikasa handràra ny fanatontosana ny fivoriamben'ny fikambanan'ny mpisolovava Kameròna. […] Andro vitsy talohan'io, nandràra ny fivorian'ny sendikan'ny mpamily fiarakaretsaka ihany koa itysous-prefet ity[…].
Ny faran'ny herinandro lasa teo, noraràny ihany koa ny diabe nokasain'ny fikambanana tsy miankina Jane And Justice, diabe mikendry ny hampitombo ny fahatsiarovan-tenan'ny vahoaka manoloana ny lozam-pifamoivoizana. Tamin'io andro io ihany, nandràra fivoriana tsy ara-dalàna nataon'ny ligim-paritry ny mpanao fanatanjahan-tena koa ity sous-prefet ity. “Farafaharatsiny, mbola misy olona manan-tsaina eto,” hoy ny sasany. Nanome alalana ny fivoriana ihany ity sous-prefet ity taorian'ny fanerena avy amin'ny Minisitry ny Fanatanjahantena sy ny Fanabeazana Ara-batana. […]
Tamin'ny fanehoan-kevitra tamin'ity lahatsoratra ity, diso fanantenana i Ti Aya:
Tena fihemorana ve izany? Toa hitako tahaka izany foana ny fandehan-javatra, sa tsy izany?
Tao amin'io lahatsoratra io ihany, mitatitra toe-javatra iray hafa i Édouard Tamba, fandraràna ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny fikambanana sivily ho fiarovana ny tombontsoa iombonana (ACDIC), miaraka amin'ireo sarin'ny famoretana mahery vaika ny hetsi-panoherana tao Yaoundé avy amin'ity fikambanana ity tamin'ny 10 Desambra.
Ho setrin'izany hetsika izany, François Bimogo, tonian'ny gazety Éclat d'Afrique, nandefa ity hafatra ity [fr]:
Taorian'ny fandraràna […] ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety […], nanao fihetsiketsehana nahitana olona manodidina ny 500 teo […] tao Yaoundé […] ny fikambanana sivily ho Fiarovana ny Tombontsoa Iombonana.
Polisy misahana ny rotaka teo amin'ny 50 no niatrika mpanao fihetsiketsehana tsy mitondra fitaovam-piadiana afa-tsy sora-baventy miampanga fanodikodinam-bola, kolikoly sy ny valintenin'ny governemanta manoloana ny krizy ara-tsakafo izay mandrahona an'i Kamerona tamin'ny taona 2009; niezaka nisambotra ny filohan'ny ACDIC […], Bernard NJONGA ny polisy. Taorian'ny herisetra mahery vaika, nisambotra mpanao fihetsiketsehana 30 teo izy ireo […].
Tao amin'ny lahatsorany, Édouard Tamba naneho hevitra hoe:
Raha mikasika ny lalàna mifehy ny fihetsiketseham-bahoaka, mety azo iadian-kevitra ihany ny fihetsiky ny ACDIC. Saingy ny fahatongavana amin'ny herisetra toy izany no mahatonga fanontaniana betsaka.
Afaka manazava izany ny fiafaràn'ny hafatr'i François Bimogo:
Araka ny fanadihadiana natao, nahita ny ACDIC fa tamin'ny taona 2006, 1.2 miliara CFA francs mahery [2.5 tapitrisa dolara amerikana] no nahodin'ny Departemantan'ny fambolena sy ny fampandrosoana ny Ambanivohitra.
Azo jerena ato amin'ity bilaogy ity ny vaovao bebe kokoa momba ity lohahevitra ity [fr].
Na dia nilaza aza ny tatitra 2007 fanaon'ny ONG Reporters Without Borders isan-taona fa manomboka hita taratra ao Kamerona ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, dia mbola marefo sy mety mora iharan'ny fandrahonana izany.
Ao amin'ny PrinceReport, manoritsoritra ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny lahatsoratra nosoratan'i Yemti Harry Ndienla, araka ny tatitra nataon'ny Departemantam-panjakana Amerikana:
Miharatsy hatrany ny tatitra momba ny zon'olombelona ao Kamerona ary mbola manohy manao fanitsakitsahana ny zon'olombelona marobe isan-taona ny governemanta. Mamono olona maro tsy araka ny lalàna, mampijaly, midaroka sy manao fanararaotana hafa hatrany, indrindra indrindra amin'ireo gadra sy voafonja ireo mpitandro filaminana tohanan'ny fanjakana ary tsy voasazy. Etsy ankilany, mbola ratsy sy mety mahafaty ny fepetra iainana any am-ponja no sady mbola misambotra sy managadra olom-pirenena mpiteny anglisy (SCNC) mpiaro zon'olombelona, mpanara-maso ny zon'olombelona sy mpikatroka, olom-pirenena hafa ary indrindra ny mpanao gazety tsy amin'ny antony ny manampahefana. Ankoatra izany, misy ny tatitra mampikorontan-tsaina momba ny fanagadrana ela sy indraindray miafina ary koa fanitsakitsahana ny zo momba ny fiainana manokan'ireo olom-pirenena.
Miampanga hatrany ny voalaza etsy ambony ny tatitra isan-taona momba an'i Kamerona avy amin'ny Departemantam-panjakana Amerikana, ka anisan'izany ny “fameran'ny governemanta ny fahalalaham-pitenenan'ny olom-pirenena, ny gazety, ny fivoriana, ny fikambanana, sy ny fanorisorenana mpanao gazety. Noraràn'ny governemanta ihany koa ny fahalalahana hanao fihetsiketsehana ho an'ny olom-pirenena. Hitan'ny vahoaka fa olana goavana ny kolikoly ataon'ny governemanta. Olana ihany koa ny herisetra sy fanavakavahana ara-tsosialy amin'ny vehivavy; ny fanondranana olona an-tsokosoko, indrindra ny ankizy; ny fanavakavahana an'ireo tompotany Pygmées sy ny foko vitsy an'isa; ary ny fanavakavahana ny pelaka. Noferan'ny fitondram-panjakana ny zon'ny mpiasa sy ny asan'ireo fikambanana tsy miankina mpiaro ny mpiasa, anisan'ny notaterina ho olana ihany koa ny fampiasana zaza tsy ampy taona, ny fanandevozana ary ny asa an-terivozona, anisan'izany ny asa an-terivozona ataon'ny ankizy.”
Samy milaza ny olana manokana ao amin'ny faritany roa avaratra-andrefana miteny Anglisy ao Kamerona, izay misy ny hetsika separatista ity tatitra sy ny tatitra iray hafa.
Nolazain'i Narmer ny tantaran'i Njoya Hilary Tikum, izay nandositra an'i Kamerona tamin'ny taona 2006 noho izy mpiteny Anglisy mpisintaka sy nijaly ny famoretana tao amin'ny fireneny. Nitady izy ary nahazo fialokalofana politika tany Etazonia, ary monina any New York izy ankehitriny.
Tsy ravan'ny ady i Kamerona, saingy mbola matanjaka ny fitondran'i Paul Biya, ary mila mandroso ny fahalalahana ao amin'ny fireneny.